राखी सावन्तको हट फोटो सार्वजनिक: सामाजिक संजालमा भईन ट्रोल! -बिगुल न्यूज
राखी सावन्तको हट फोटो सार्वजनिक: सामाजिक संजालमा भईन ट्रोल!
एजेन्सी, राखी सावन्त जब सोशल मीडियामा आफ्नो तस्वीर या भिडियो शेयर गर्छिन तब उनि हरेक पटक चर्चामा आउने गर्छिन । नयाँ वर्ष २०१८ को शुरुवातमा नै एक बोल्ड तस्वीरले उनि ट्रोल बनेकी छिन् । वास्तवमा राखीले नयाँ वर्षको मौकामा आफ्नो एक बिकिनी फोटो शेयर गरेकी थिईन । जसमा उनि रातो र कालो रङको प्रिन्टेड स्विमसूट निकै बोल्ड अवतारमा देखिएकी थिइन् ।
राखी सावन्तलाई बिकिनी ड्रेसमा पूल साइटमा बसेर चस्मा लगाएर बसेको देखिन्छिन् । तर उनको केहि फ्यानहरुलाई भने उनको यो अवतार राम्रो नलागेको भारतीय संचार माध्यमले जनाएको छ । धेरैले राखीको तस्वीरमा अश्लील र नराम्रो कमेन्ट गर्न शुरु गरेका छन् । २३ घण्टा भित्र यस तस्वीरलाई ५ हजार भन्दा पनि धेरै लाइक आएको छ ।
कमेन्ट बक्समा धेरैजसो मानिसहरुले नराम्रो कमेन्ट गरेका छन् । एक यूजरले राखीलाई घोडा समेत भनेको छ । उनले लेखेका छन् कि घोडा पानी खाएर बाहिर निदाएको जस्तो छ । साथै दोस्रो यूजरले ‘ बाकि सबै ठिक छ तर स्विमसूट थोरै टाइट भएको छ । ‘ र अर्को यूजरले लेखे,’ ‘तस्वीर देखे पछि मलाई उल्टी गर्न मन लाग्यो । ‘ लगाएतको कमेन्टहरुले गर्दा राखी प्राय: आफ्नो तस्वीरहरुमा ट्रोल हुने गरेकी छिन् ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, पुष १८, २०७४१२:२७
आश्माको ट्याटुले युट्युबमा राख्यो यस्तो कीर्तिमानी – [भिडियो सहित]
सलमानले छोडे ऋतिकले अपनाए कुमकुम भाग्यकी मृणालले मारिनले बाजी
क्रिकेटर विराट कोहलीले प्रेमिका अनुष्का शर्माको उपनाम यस्तो राखे
चलचित्र ‘शेरबहादुर’ मा मेनुका प्रधान र कर्माको आइटम डान्स [भिडियो सहित]
फेरी विवादमा तानिईन सारा अलि खान, यस्तो छ कारण
विश्वो चर्चित पपस्टार माइकल ज्याक्सनको मृत्युको रहस्य आठ वर्षपछि खुल्यो, छोरीले गरिस् यस्तो खुलाशा
सलमानले रीमा लागुलाई अन्तिम पटक यसरी अंगालो हाली चुम्बन गरेका थिए ,यो हेरी सबैको आँखा रसाउँछ (भिडियो)